» Maamulka Muqdisho mise meelaha kale? (Faallo)
Maamulka Muqdisho mise meelaha kale? (Faallo)
February 19, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareNapoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant’Elena, 5 maggio 1821) Xilli uu duullaan ku ahaa dalka Masar, ayaa Saraakiil Sarsare oo ka tirsan ciidankiisu ka soo horjeesteen. Si uu ugu qanciyo ayuu wuxuu yiri, oraahdaan caan baxday ee ah: “Ii sheeg qofka Masar xukuma, waxaan kuu sheegayaa qofka adduunka xukumee!” illeen Masar waxaa ku yaal Marinka Suways, oo halbowle iyo dhuun u ah isu gooshka dhammaan ganacsiga dunida.
Meel xun iyo magaal xasarad gaar u leh ma jirto. Waxaase jira MAAN MARAN iyo MAQAAM MURAN! Micnaha dadka iyo dareenkooda unbaa xume, daar ama duddun daran ma jiraan. Waa tii la yiri: “Duddun dareensi iyo duggaashi ma gasho!” waxay tahay in aadan mar walba laba isku helayn, aan ku qotomiyo teennee, adoo xun magaalo ma wanaajin kartid. Dad iyo dabcigiis ka sii fog baan filaa. Maxaa yeelay; maan ahaan uma diyaarsanid, inta aan la gaarin maqaam iyo muuqaal
One Response to Maamulka Muqdisho mise meelaha kale? (Faallo)
Mohiyadiin (cashara) says:	February 19, 2013 at 09:09	War kan markan egay qoralkisa wa qabilayste wana dadka xamar isa siyay